ကလေးတွေကို ရွှေဝတ်ပေးတဲ့ မိဘများ သင်ခန်းစာ ယူဖို့ လှိုင်သာယာမှာ ဖြစ်သွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်. . . - Myanmar People Alliance
ကလေးတွေကို ရွှေဝတ်ပေးတဲ့ မိဘများ သင်ခန်းစာ ယူဖို့ လှိုင်သာယာမှာ ဖြစ်သွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်. . .
မိဘတွေဟာ ကလေးတွေကို ချစ်ကြတာကြောင့် လှဖို့ ကြည့်ကောင်းဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ရွှေငွေလက်ဝတ်ရတနာတွေ ဆင်ပေးကြပါတယ်…။
တကယ်တော့ အသက်ငယ်သေးတဲ့ ကလေးတွေကို ခုလိုတန်ဖိုးကြီးတာတွေ ဆင်ပေးတာဟာ အန္တရာယ်များတယ်ဆိုတာ အောက်က ဖော်ပြပေးလိုက်ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးက သက်သေပါပဲ….
ဖြစ်စဉ်က(( မနေ့က လှိုင်သာယာမြို့နယ် 20 ရပ်ကွက်အပိုင်အတွင်းလမ်းထဲသို့ ကလေး သုံးယောက် (မိန်းကလေးများသာ)ကို မိန်းမတဦးမှ အတင်းခေါ်ဆောင် နားကွင်းချွတ်ယူမှု့ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ် နားကွင်းက အပ်ချည်နဲ့တုတ်ထားတာကို ဓါးနဲ့ ဖြုတ်ယူသွားတာပါ အတော်အတင့်ရဲလာကြပါပြီ။
ခေါ်ဆောင်ခံရသူတွေဖြစ်တဲ့ အကြီးမလေးက ကိုးနှစ်အရွယ်ဝန်းကျင်မျှသာ အလတ် နဲ့ အငယ်ဆုံးလေးမှာ အင်မတန်ငယ်သေးပါတယ် အလတ်မလေးရဲ့ နားကွင်းကို ဖြုတ်ယူခံရတာပါ။
ဖြစ်စဉ်က မိဘတွေ အိမ်ထဲပြန်ဝင်ချိန် အိမ်ရှေ့မှာ ဆော့နေတဲ့ ကလေး သုံးယောက်ကို မုန့်ဝယ်ကျွေးမယ် လာ ဆိုပြီး အတင်းခေါ် ဆောင် သွားတာပါ…မြင်သူတိုင်းကလည်း သူ့မိသားစုနဲ့သူ သွားနေကြတယ် ထင်ပြီး အမှု့မဲ့ အမှတ်မဲ့ ဖြစ်သွားကြတာပါ။
ဖြစ်စဉ် သိကြချိန်ကလည်း ကလေးတွေက ဖြုတ်ယူခံရပြီး အိမ်ကိုပြန်ပြေးချိန်၊မိဘတွေ ပြန်ပြောချိန်တွေ အချိန်များ လစ်ဟာသွားမှု့ရှိသွားတဲ့အတွက် ထိုမိန်းမအား ဖမ်းမိလိုက်ခြင်း မရှိပါ ကိုယ်လည်း သိသိခြင်း အပိုင် တာဝန်ရှိသူများကို အကြောင်းကြားပေးပါတယ်..။
တာဝန်ရှိသူများက ကလေးများကို ချော့မော့မေးသော်လည်း ကြောက်ရွံ့နေကြသောကြောင့် လူပုံစံ အနေအထား အတိအကျ မသိရှိရပါ မိန်းမတဦး ဟုသာ သိရပါတယ်…
အိမ်နီးနားအချင်းချင်း ကူညီစောင့်ရှောက် စည်းလုံးဖို့လည်း လိုပါတယ်။ မိဘများမှ လည်း ရွှေမဝတ်ပေးခြင်းက အကောင်းဆုံးပါပဲ ကိုယ့်ရင်သွေးများကို အထူးဂရုပြု စောင့်ရှောက်ကြပါ။ ကလေးများပြန်ရခြင်းက အင်မတန် ကံကောင်းတယ် ဆိုရပါမယ်.။
နေရာ -လှိုင်သာယာမြို့ 20 ရပ်ကွက် အပိုင်7မြသီရိလမ်း မှ ခေါ် ဆောင်လာ အပိုင်7ကွက်သစ်ထဲရှိ လမ်း အတွင်းမှာ ဖြုတ်ယူ ကာ(ကလေးစကားအရ) အနော်ရထာ လမ်းမကြီးဘက် ပြန်ထွက်သွား ပါတယ် တဲ့ …))။
အထက်ပါအဖြစ်အပျက်လေးကတော့ ကိုယ့်ရင်သွေးကို ချစ်ပေမဲ့ တန်ဖိုးကြီးတာတွေ မဆင်ပေးဖို့ လိုတယ်ဆိုတာ သက်သေပါပဲ…တကယ်လို့ ဆင်ပေးချင်တယ်ဆိုရင်လည်း မိမိရင်သွေးလေးကို မျက်စိအောက်ကအပျောက်မခံဘဲ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ကြည့်ရှုနေနိုင်မှသာ ဆင်ပေးကြဖို့ လိုပါတယ်နော်။ Source-SYL
မိဘတှဟော ကလေးတှကေို ခဈြကွတာကွောငျ့ လှဖို့ ကွညျ့ကောငျးဖို့ ရညျရှယျပွီး ရှငှေလေကျဝတျရတနာတှေ ဆငျပေးကွပါတယျ…။
တကယျတော့ အသကျငယျသေးတဲ့ ကလေးတှကေို ခုလိုတနျဖိုးကွီးတာတှေ ဆငျပေးတာဟာ အန်တရာယျမြားတယျဆိုတာ အောကျက ဖျောပွပေးလိုကျရတဲ့ အဖွဈအပကျြလေးက သကျသပေါပဲ….
ဖွဈစဉျက(( မနကေ့ လှိုငျသာယာမွို့နယျ 20 ရပျကှကျအပိုငျအတှငျးလမျးထဲသို့ ကလေး သုံးယောကျ (မိနျးကလေးမြားသာ)ကို မိနျးမတဦးမှ အတငျးချေါဆောငျ နားကှငျးခြှတျယူမှု့ ဖွဈပှားခဲ့ပါတယျ နားကှငျးက အပျခညျြနဲ့တုတျထားတာကို ဓါးနဲ့ ဖွုတျယူသှားတာပါ အတျောအတငျ့ရဲလာကွပါပွီ။
ချေါဆောငျခံရသူတှဖွေဈတဲ့ အကွီးမလေးက ကိုးနှဈအရှယျဝနျးကငျြမြှသာ အလတျ နဲ့ အငယျဆုံးလေးမှာ အငျမတနျငယျသေးပါတယျ အလတျမလေးရဲ့ နားကှငျးကို ဖွုတျယူခံရတာပါ။
ဖွဈစဉျက မိဘတှေ အိမျထဲပွနျဝငျခြိနျ အိမျရှမှေ့ာ ဆော့နတေဲ့ ကလေး သုံးယောကျကို မုနျ့ဝယျကြှေးမယျ လာ ဆိုပွီး အတငျးချေါ ဆောငျ သှားတာပါ…မွငျသူတိုငျးကလညျး သူ့မိသားစုနဲ့သူ သှားနကွေတယျ ထငျပွီး အမှု့မဲ့ အမှတျမဲ့ ဖွဈသှားကွတာပါ။
ဖွဈစဉျ သိကွခြိနျကလညျး ကလေးတှကေ ဖွုတျယူခံရပွီး အိမျကိုပွနျပွေးခြိနျ၊မိဘတှေ ပွနျပွောခြိနျတှေ အခြိနျမြား လဈဟာသှားမှု့ရှိသှားတဲ့အတှကျ ထိုမိနျးမအား ဖမျးမိလိုကျခွငျး မရှိပါ ကိုယျလညျး သိသိခွငျး အပိုငျ တာဝနျရှိသူမြားကို အကွောငျးကွားပေးပါတယျ..။
တာဝနျရှိသူမြားက ကလေးမြားကို ခြော့မော့မေးသျောလညျး ကွောကျရှံ့နကွေသောကွောငျ့ လူပုံစံ အနအေထား အတိအကြ မသိရှိရပါ မိနျးမတဦး ဟုသာ သိရပါတယျ…
အိမျနီးနားအခငျြးခငျြး ကူညီစောငျ့ရှောကျ စညျးလုံးဖို့လညျး လိုပါတယျ။ မိဘမြားမှ လညျး ရှမေဝတျပေးခွငျးက အကောငျးဆုံးပါပဲ ကိုယျ့ရငျသှေးမြားကို အထူးဂရုပွု စောငျ့ရှောကျကွပါ။ ကလေးမြားပွနျရခွငျးက အငျမတနျ ကံကောငျးတယျ ဆိုရပါမယျ.။
နရော -လှိုငျသာယာမွို့ 20 ရပျကှကျ အပိုငျ7မွသီရိလမျး မှ ချေါ ဆောငျလာ အပိုငျ7ကှကျသဈထဲရှိ လမျး အတှငျးမှာ ဖွုတျယူ ကာ(ကလေးစကားအရ) အနျောရထာ လမျးမကွီးဘကျ ပွနျထှကျသှား ပါတယျ တဲ့ …))။
အထကျပါအဖွဈအပကျြလေးကတော့ ကိုယျ့ရငျသှေးကို ခဈြပမေဲ့ တနျဖိုးကွီးတာတှေ မဆငျပေးဖို့ လိုတယျဆိုတာ သကျသပေါပဲ…တကယျလို့ ဆငျပေးခငျြတယျဆိုရငျလညျး မိမိရငျသှေးလေးကို မကျြစိအောကျကအပြောကျမခံဘဲ ထိနျးသိမျးစောငျ့ရှောကျကွညျ့ရှုနနေိုငျမှသာ ဆငျပေးကွဖို့ လိုပါတယျနျော။ Source-SYL